2021 cybersecurity research: Masangano anorerutsa njodzi yecyberattack
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » 2021 cybersecurity research: Masangano anorerutsa njodzi yecyberattack
Skybox Chengetedzo logo (PRNewsfoto/Skybox Security)
Supply cheni uye yechitatu-bato njodzi inotyisa kune inoshanda tekinoroji
- Kunyanya kuzvivimba kunofananidzira kukanganisa mune ramangwana: 73% yeCIOs neCISOs "vane chivimbo chikuru" havangatamburi nekutyorwa kweOT mugore rinotevera.
- Cybersecurity ichiri kufunga: Cyber ​​inishuwarenzi inoonekwa seyakakwana mhinduro ne40%
- Kuoma kunzwisisa kunowedzera njodzi: 78% yevakapindura vakapokana nemultivendor yakaoma
Tsvakurudzo itsva yakaitwa na Skybox Security vakawana kuti 83% yemasangano akatambura tekinoroji yekushanda (OT) cybersecurity kutyorwa mumwedzi makumi matatu nematanhatu yapfuura. Tsvagiridzo iyi yakafumurawo kuti masangano haakoshese njodzi yecyberattack, ne36% yeCIOs neCISOs "vane chivimbo chakanyanya" masangano avo haazotambure nekutyorwa kweOT mugore rinotevera.
“Haasi mabhizinesi chete anovimba neOT, veruzhinji pazere vanovimba nehunyanzvi uhu hwemabasa akakosha anosanganisira simba nemvura. Nehurombo, ma cybercriminals vese vanonyatsoziva kuti yakakosha kuchengetedzwa kwezvivakwa kazhinji haina kusimba. Nekuda kweizvozvo, vanotyisidzira vanotenda kuti kurwiswa kwerudzikinuro paOT kunogona kubhadhara zvakanyanya, "akadaro Skybox Security CEO uye Muvambi Gidi Cohen. "Sezvinoita uipi hunobudirira mukusakendenga, kurwiswa kwerensomware kuchaenderera mberi nekushandisa kusagadzikana kweOT chero bedzi kusaita kuchienderera mberi."
Tsvakurudzo itsva, Kushanda tekinoroji cybersecurity njodzi yakadzikiswa zvakanyanya, inofumura hondo yekukwira iyo OT kuchengetedza yakatarisana nayo - inosanganisirwa netiweki yakaoma, inoshanda silos, njodzi yekugovera ketani, uye mashoma ekugadzirisa kusazvibata sarudzo. Vanotyisidzira vanotora mukana wekusasimba kweOT nenzira dzisingangoise makambani ega - asi kutyisidzira hutano hweveruzhinji, kuchengetedzwa, uye hupfumi.
Masangano anorerutsa njodzi yecyberattack
Makumi mashanu nenhanhatu muzana yevose vakapindura "vaine chivimbo chikuru" sangano ravo harizosangana nekutyorwa kweOT mugore rinotevera. Asi, 83% vakatiwo vanga vaine kamwechete kutyora kuchengetedza kweOT mumwedzi makumi matatu nematanhatu yapfuura. Pasinei nekutsoropodza kwezvivakwa izvi, maitiro ekuchengetedza aripo kazhinji haana simba kana kuti haapo.
CISO inobvisa pakati pekuona uye chokwadi
Makumi manomwe nematatu muzana emaCIO nemaCISO vane chivimbo chakanyanya kuchengetedzwa kwavo kweOT hakutyorwe mugore rinotevera. Kuenzaniswa ne37% chete yevatungamiriri vezvidyarwa, vane zvimwe zviitiko zvekutanga nemhedzisiro yekurwiswa. Nepo vamwe vachiramba kutenda masisitimu avo eOT ari panjodzi, vamwe vanoti kutyora kunotevera kuri pakona.
Kuteerera hakuna kuenzana nechengetedzo
Kusvika iye zvino, mitemo yekuteerera yakaratidza kuti haina kukwana mukudzivirira zviitiko zvekuchengetedza. Kuchengeta kutevedza mirau uye zvinodiwa ndiyo yaive yakanyanya kunyanya kunetseka kune vese vakapindura. Regulatory kutevedzera zvinodiwa zvicharamba zvichiwedzera muchiedza chezvino kurwiswa kwezvivakwa zvakakosha.
Kuoma kunowedzera njodzi yekuchengetedza
Makumi manomwe nesere muzana vakati kuomarara nekuda kwematekinoroji akawanda idambudziko mukuchengetedza nharaunda yavo yeOT. Pamusoro pezvo, 39% yevose vakapindura vakati chipingamupinyi chepamusoro chekuvandudza zvirongwa zvekuchengetedza sarudzo dzinoitwa muzvikamu zvebhizinesi rega pasina tarisiro yepakati.
Cyber ​​liability insurance inoonekwa seyakakwana nevamwe
Makumi matatu nemana muzana evakapindura vakati cyber liability inishuwarenzi inoonekwa seyakakwana mhinduro. Nekudaro, inishuwarenzi yecyber liability haivharidzire "bhizinesi rakarasika" rinodhura rinobva mukurwiswa kwerudzikinuro, inova imwe yezvitatu zvinonetsa zvevakapindura ongororo.
Exposure uye nzira yekuongorora ndizvo zvekutanga zvecybersecurity
Makumi mana neshanu muzana emaCISOs nemaCIO anoti kusakwanisa kuita ongororo yenzira munzvimbo yese kuti vanzwisise kuratidzwa chaiko ndechimwe chezvinhu zvitatu zvepamusoro zvine chekuita nekuchengetedza. Kupfuurirazve, maCISO nemaCIO akati zvivakwa zvakapatsanurwa munzvimbo dzese dzeOT neIT (48%) uye kusanganiswa kweIT tekinoroji (40%) mbiri dzenjodzi dzavo dzepamusoro nhatu dzekuchengetedza.
Inoshanda silos inotungamira kugadzirisa mapundu uye kuoma kwehunyanzvi
MaCIO, CISOs, Architects, Injiniya, uye Plant Maneja ese anonyora anoshanda masilos pakati pematambudziko avo epamusoro mukuchengetedza OT zvivakwa. Kugadzirisa OT kuchengetedza mutambo wechikwata. Kana nhengo dzechikwata dzichishandisa mabhuku ekutamba akasiyana, kashoma kuhwina pamwechete.
Supply cheni uye yechitatu-bato njodzi inotyisa huru
Makumi mana muzana evakapindura vakati kugovera cheni / yechitatu-bato kuwana kunetiweki ndeimwe yemhando nhatu dzepamusoro dzekuchengetedza njodzi. Asi, 46% chete ndivo vakataura sangano ravo segwaro rechitatu rekuwana iro rinoshanda kuOT.